रोजमेरी आवश्यक तेल
प्रकाशित 10.05.2021 10.05.2021
यदि महँगो कपाल मास्कहरूको लागि पैसा छैन भने, वा तपाईंले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नुभएको छैन। एक रोमेरी आवश्यक तेल मास्क बनाउनुहोस्।
आधुनिक संसारमा, जब सबै हतारमा हुन्छन्, तिनीहरू धेरै काम गर्छन् र स्वास्थ्यमा थोरै समय खर्च गर्छन्। सबैले उदासिनता अनुभव गरेको छ, तर कसरी यसको उपचार गर्ने, यसलाई रोक्न सकिन्छ?
स्वास्थ्य र सौन्दर्यको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन्, र सबैले सीधा सोध्दैनन्। तिनीहरू मध्ये कम्तीमा छलफल गरौं!
मिठो खान बन्द गर्नुहोस्
चिनी र मिठोका खतराहरूबारे के धेरैले पहिल्यै पढेका छन्? तर हामी कसरी त्यसलाई इन्कार गर्न सक्छौं? मिठाई खान छोड्ने सही तरीका के हो?
किन कम ग्रेड ज्वरो आउँछ?
प्रकाशित 15.09.2019 25.09.2019
Subfebrile शरीर तापमान एक तापमान छ कि केही बढ्छ र -37 38--XNUMX डिग्री सेल्सियस को दायरा भित्र रहन्छ। यस्तो तापक्रम पर्याप्त सामान्य घटना हो, जसका कारणहरू धेरै विविध छन्। लामो समय सम्म कम ग्रेड ज्वरो ...
Validol: अनुप्रयोग, मिथक र सत्य
रुसीमा भेलिडोल भन्दा लोकप्रिय औषधी पाइँदैन, मुटुमा दुखाइ कम गर्न, विशेष गरी “नौसिखिया मुटु बिरामीहरू” मा। व्यक्तिहरूले यसलाई शान्त गराउँदछन्, केहि पिउन यसलाई उत्तम हुनको लागि ...
अम्ब्लियोपिया - यो के हो? बच्चाहरूमा एम्ब्लियोपिया: डिग्री र उपचार
पछिल्लो तथ्या .्कका अनुसार एम्ब्लोपिया पत्ता लागेको २% वयस्क वयस्कमा देखा परेको थियो तर बालबालिकाको बीचमा अवस्था केही फरक हुन्छ जुन आँखा क्लिनिक वा विशेष चिकित्सा संस्थाहरूमा बारम्बार भ्रमण गर्ने पुष्टि हुन्छ। द्वारा…
किन अनुहार मेरो अनुहार मा देखा पर्‍यो? अनुहारमा चकत्तेका कारणहरू
प्रत्येक व्यक्ति अनुहारमा एक्ने को रूप को रूप मा यस्तो उपद्रव सामना गर्नु पर्छ। र कोही तिनीहरू नियमित तवरबाट पीडित छन्। तिनीहरूको घटनाको फ्रिक्वेन्सी जस्तोसुकै भए पनि, एक्ने अत्यधिक अप्रत्याशित रूपमा देखा पर्दछ। यो हिजो देखिन्छ कि ...
कसरी मासिक चक्र पुन: स्थापना गर्ने: विधिहरू
मासिक चक्र कसरी पुन: स्थापना गर्ने? महिला शरीर एक रहस्य हो। यसमा धेरै सुविधाहरू छन्। मासिक धर्म एक केटी को लागी एक विशाल र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एक तथाकथित मासिक धर्म चक्रमा, कण परिपक्व हुन्छ ...
"ब्रीथ" (तेल): समीक्षा, वर्णन, मूल्य
प्रकाशित 15.09.2019 02.12.2019
हरेक वर्ष चिसो र फ्लूको लागी लाग्ने औषधिहरू फरक फरक सुगन्ध र स्वादको साथ नयाँ फार्ममा उत्पादन हुन्छन्। नियमको रूपमा, त्यस्ता रकमहरू रोगको पहिलो संकेतहरूमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले बलियो ...
कार्बन मोनोअक्साइडको प्रभाव मानव शरीरमा। कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तताको साथ मद्दत गर्नुहोस्
सम्भवतः सबैले कम्तिमा एक पटक "कार्बन मोनोअक्साइड" जस्ता कुरा सुनेका छन्। वास्तवमा, यस पदार्थको कारण, धेरै व्यक्तिले दुःख भोगेका छन्। दुर्भाग्यवस, कार्बन मोनोअक्साइडको सचेतताको बावजुद, यसको साथ विषाक्तता अझै ...
नाक "Rinorus" ड्रप: प्रयोगको लागि निर्देशन, समीक्षा
Rinorus औषधी कुन उद्देश्यका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ? प्रयोगको लागि निर्देशनहरू, साथै यो उपकरणका संकेतहरू प्रस्तुत लेखमा वर्णन गरिनेछ। हामी तपाइँलाई पनि कहिले ...
चम्मचमा कति बूँदहरू हुन्छन्: पानी, तेल वा अन्य तरल?
प्रकाशित 15.09.2019 28.12.2019
पाक कलाका ज्योतिषीहरूले दावी गरे कि कुनै पनि डिशको सफलता उत्पादनको गुणस्तरका कारण percent० प्रतिशत हुन्छ, २० प्रतिशत नुस्खाको “स्वाद”, र percent० प्रतिशत प्रतिभा र यसलाई तयार गर्ने कुकुराहरूको शुद्धतामा। ...
सेनेटोरियम "ईस्क्रा" (सोची): समीक्षा, फोटोहरू
सेनेटोरियम "ईस्क्रा" (सोची) रूसको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहेको छ। यो शहरको خوستिंस्की जिल्लाको तटमा अवस्थित छ। नजिकै एक पार्क क्षेत्र छ जहाँ तपाईं दुर्लभ subtropical बोटहरु सबै वर्ष मा प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। वायु तापमान मा ...
दायाँ हातको औंला किन सb्कित छ? कारण के हो?
हालसालै, सुन्न नसक्ने समस्याको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूको संख्या बढेको छ। दायाँ हातको औंला किन सुन्न सकिन्छ? यो प्रश्न धेरै प्रासंगिक भएको छ। र यो कुनै संयोग होइन कि यो परिस्थिति विश्वव्यापी कम्प्युटरीकरणको युगसँग मेल खान्छ।
आमाको लागि सुझावहरू: कस्तो प्रकारको डाक्टर तपाईलाई बालवाडीको लागि जान आवश्यक छ
समय बित्छ, बच्चा ठूलो हुन्छ, र यस्तो समय आउँदछ जब बच्चालाई बालवाडीमा पठाउन आवश्यक पर्दछ। यो नोट गर्नु पर्दछ कि यो सजिलो कुरा होइन। तपाईंले निर्णय गर्नु आवश्यक छ भन्ने तथ्यको अतिरिक्त ...
मह संग पानी। तौल घटाउन को लागी खाली पेट पानी संग मह। पानी र कागती संग मह
पानीको गुणहरु लगातार वैज्ञानिक स्तर मा अनुसन्धान भइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि यसले हाम्रो ग्रहको अधिकांश भाग लिन्छ, मानव शरीर यसको percent० प्रतिशत हुन्छ, र यो हो ...
नवजात शिशुहरूका लागि मोमबत्ती "ग्लाइलेक्स": निर्देशनहरू, समीक्षा, मूल्यहरू
एउटै बच्चा अहिलेसम्म कुनै औषधि नलिई हुर्किएको छ। केहि औषधि तापक्रम कम गर्न र सर्त सामान्यीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ, जबकि अरूले एलर्जी समाप्त गर्न सक्दछन्। प्रायः, बच्चाहरूले मोमबत्तीहरू बत्ती दिनु पर्दछ ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 957 अर्को पाना
64 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 8,425 प्रश्नहरू।